Abesilisa Apparel, Padded Jacket, Men Clothing - Hengqianxiang
Induduzo, Ukusebenza Okuphezulu, Inoveli
Super Warm Winter Abesilisa Izingubo Okuhlelekile Gqoka Padde ...
Igobolondo 100% i-polyester Lining 100% i-polyester Ukugcwalisa i-90% idada phansi, i-10% yophaphe Usayizi Noma yiluphi usayizi luyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Okunye Isingeniso sangempela se-raccoon Umkhiqizo Isingeniso Lesi sigqoko samadoda sasebusika sifudumele kakhulu. Umklamo wolayini ohlukile wenza ijakhethi ibe yincane. Uboya obukhulu be-raccoon obukhulu bugcina umoya. Izici zomkhiqizo zifudumele kakhulu, inguqulo enhle.
Factory Isitolo esidayisa yonke impahla Abesilisa Izingubo Fashional Izingubo ...
Igobolondo 100% i-polyester Lining 100% i-polyester Ukugcwalisa i-90% idada phansi, i-10% yophaphe Usayizi Noma yiluphi usayizi luyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Isingeniso soMkhiqizo Ingubo emfushane ephansi iyinsimbi elula, ithambile futhi ifudumele. umklamo woboya bamawundlu odumile. Izici zomkhiqizo zinesisindo esincane, zikhululekile, zinhle.
Factory Umkhiqizi Abesilisa Izingubo Okuvamile Wear Sh ...
Igobolondo le-Shell 98%, i-2% i-polyester Lining 100% i-polyester, Ukulingisa amawundlu woboya Ukugcwalisa i-100% i-polyester Usayizi Noma yiluphi usayizi luyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Isingeniso soMkhiqizo Izindwangu zikakotini zekhwalithi enhle zenza ijazi libe sebangeni eliphakeme. Ijakhethi iza nokusika okukhazimulayo okulingana kahle umzimba wakho, futhi kukwenza ubukeke usezingeni eliphezulu futhi nenhle. U-50% woboya kukwenza uzizwe ufudumele ebusika noma ekwindla. Izici zomkhiqizo Isitayela, ukufudumala, ukuvimbela umoya, isisindo esikhethekile sokukhanya nezinto ezifudumele.
Ifektri Yomkhiqizi Wefektri Ehlelekile Emifushane
Igobolondo 100% i-polyester Lining 100% i-polyester Ukugcwalisa 100% i-polyester Usayizi Noma yimuphi usayizi uyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Isingeniso soMkhiqizo Indwangu yekhwalithi enhle yoboya yenza ijazi libe sebangeni eliphakeme. Ijakhethi iza nokusika okukhazimulayo okulingana kahle umzimba wakho, futhi kukwenza ubukeke usezingeni eliphezulu futhi nenhle. U-50% woboya kukwenza uzizwe ufudumele ebusika noma ekwindla. Izici zomkhiqizo Uhlobo oluhle, olungenawo umoya, olufudumele.
Ijackethi Yabesilisa Egqoke Okuhlelekile I-Long Windbreaker Jacket
Igobolondo 100% Ukotini Lining 100% Usayizi we-polyester Noma yimuphi usayizi uyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Isingeniso soMkhiqizo idizayini ebelethwe kabili, umhlobiso weBelt. Uhlobo oluncane futhi olude lukwenza ubukeke umuhle.Ijekethi ende ye-beige isitayela esingapheli isikhathi. Izici zomkhiqizo Uhlobo oluhle, olungenawo umoya, olufudumele.
100% Polyester Windproof ngokwezifiso Abesilisa iDemo Bombe ...
I-Shell 100% polyamide Lining 100% polyester Usayizi Noma yimuphi usayizi uyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Isingeniso somkhiqizo Le ngubo iza namapayipi amnyama, futhi ikhombisa ubuhlakani nesimo sangaleso sikhathi. Iphakethe elifakwe uziphu engalweni libekwe ngendlela ehlukile, futhi lengeza i-funk engutsheni elula ngenye indlela. Yenziwe ngendwangu esezingeni eliphakeme engenamanzi futhi engenawo umoya.Kukulungele ukugqoka kwangaphandle nangokweqile. Izici zomkhiqizo Amanzi angangeni futhi angenawo umoya, omile ngokushesha.
Hot Yamadivayisi Winter Abesifazane Izingubo Fashional Down C ...
Igobolondo 100% polyamide Lining 100% polyester Ukugcwalisa 90% idada phansi, 10% uphaphe Usayizi Noma yimuphi usayizi uyatholakala Umbala Noma imuphi umbala uyatholakala Abanye Ukwethulwa komkhiqizo I-pink Down Jacket ecwebezelayo yakhelwe ngokuphelele ukulwa nobusika obunzima ngaphandle kokubasindisela abagqoka. Ijakhethi ifakwa ubuchwepheshe bokulingana obomile bokumelana kahle namanzi nokumelana okuphezulu nokulahleka kokushisa komzimba. Okuqukethwe kwebhantshi kuyelula futhi kuyazinza ngaphambi kokulula ...
Ezemidlalo Outwear ibhantshi Isitolo esidayisa yonke impahla wome ngezifiso ...
Isingeniso somkhiqizo Le bhantshi lezemidlalo likhululekile kakhulu ngaphandle.Indwangu ayinamanzi futhi yomile ngokushesha. Uziphu nawo awunamanzi.Ayikho inkinga ngemvula encane ngaphandle.Izindwangu eziphefumulayo zivumela umjuluko ukuba ukhiphe ngokushesha.Iphakethe lesifuba elilula. Izici zomkhiqizo 1. Iyahlala futhi inethezekile. 2. elula kahle. 3.Isisindo sokukhanya esikhethekile nezinto ezifudumele. 4, Kuhle emisebenzini yangaphandle entwasahlobo nasekwindla. Uma uthanda imibala, khona-ke leli bhantshi likulungele. I ...
Intengo yefektri yokuncintisana. Silawula zonke izindleko zengxenye ukukunikeza intengo enhle kakhulu.
Singakhipha ama-oda amancane nama-oda ahlanganisiwe.
Ngemuva kokuthi uqinisekise isampula ne-oda, singaletha izimpahla ngezinsuku ezingama-30.
Isevisi yokwenza ngokwezifiso ejulile
Singakusiza ukuthi uthuthukise izitayela zakho ezintsha ngokuya ngomqondo wakho noma umsebenzi wobuciko.
Ubuqotho, umthwalo wemfanelo, win-win
Sizoba yini isimo se-textile ne-garme ...
Ukuhweba ngezindwangu nezingubo kwaseChina bekungajwayelekile engxenyeni yokuqala yalo nyaka ngenxa yokusabalala komhlaba wonke kwe-COVID-19. Kufakwa ngoMeyi nangoJuni, eminye imininingwane ithathiwe. Isimo sonke ku ...
Isidlo sakusihlwa sabasebenzi ngaphambi koMkhosi Wentwasahlobo ka-2020, ...
Ekupheleni kuka-2019, sizofingqa umsebenzi wonyaka odlule, ngokugcizelela ngokukhethekile izinkinga emsebenzini, futhi sivumele wonke umuntu akhumbule ukwenza umsebenzi ongcono kuNyaka Omusha.Sinomenzi wenguqulo ...
Ikhwalithi yokuqala, iKhasimende eliPhambili